ဘာစီလိုနာမှာ မကစားခငျြတဲ့သူ ဘယျသူမှမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုကျတဲ့ လိုငျယှနျတိုကျစဈကစားသမား ဒီပေး – Myan Ball
ဒီပေးက ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ ကစားသမားတိုငျးက ကစားခငျြကွတယျလို့ ဝနျခံပွောကွားပွီးနောကျ ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှမှေ့ာ လာလီဂါကလပျကို ပွောငျးရှဖှေ့ယျရှိနတေယျလို့ သတငျးထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ ဘာစီလိုနာနညျးပွ ရျောနယျကိုးမနျးဟာ အသငျးကို စတငျကိုငျတှယျကတညျးက လိုငျယှနျတိုကျစဈကစားသမား ဒီပေးကို ချေါယူခငျြခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ အသငျးရဲ့ ဘဏ်ဍာရေးထိခိုကျဆုံးရှုံးမှုတှကွေောငျ့ မချေါယူနိုငျခဲ့ပါဘူး။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကပျရောဂါကွောငျ့ အသငျးဟာ ကစာသမားတှကေို ရောငျးခရြတော့မယျ့ အနအေထားအထိကို ရောကျနတောဖွဈပါတယျ။ဒီပေးဟာ လိုငျယှနျအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျး နောကျဆုံးနှဈထဲကို ရောကျနတောဖွဈလို့ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ နောကျနှရောသီမှာ အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ချေါယူလို့ရနိုငျမှာပါ။
သို့သျောလညျး သတငျးမြားအရ ဒီပေးဟာ အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးဖွဈတဲ့အထိကိုတောငျ မစောငျ့တော့ပဲ ဇနျနဝါရီမှာပဲ ပွောငျးခငျြနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒူးဒဏျရာ ခှဲစိတျခံရပွီးတဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ လူငယျတိုကျစဈမှူး အနျဆုဖာတီက (၄) လလောကျ အနားယူရမှာဖွဈလို့ အသငျးဟာ တိုကျစဈပိုငျးကို အရေးတကွီးအငျအားဖွညျ့တငျးဖို့ လိုအပျနတောဖွဈပါတယျ။
ဟောလနျ နဲ့ စပိနျ (၁-၁) သရကေခြဲ့တဲ့ပှဲအပွီးမှာ ဒီပေးက “အဲ့ဒီကို မသှားခငျြတဲ့သူ ဘယျသူမရှိဘူးလဲ? ဘာစီလိုနာအသငျးက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး အသငျးတှထေဲက တဈသငျးပါ။ လူတိုငျးက သှားခငျြနပေမေယျ့ ကြှနျတျောကတော့ အဲ့ဒါကို စဉျးစားနမှော မဟုတျပါဘူး။ ဘာစီလိုနာအကွောငျး ကြှနျတျောမသိပါဘူး။ အပွောငျးအရှကေ့လညျး မဖှငျ့သေးပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့ခေါငျးထဲမှာ ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့ ကစားသမားဖွဈလာဖို့ အကောငျးဆုံး ကွိုးစားနပေါတယျ” လို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ဘာစီလိုနာမှာ မကစားချင်တဲ့သူ ဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ လိုင်ယွန်တိုက်စစ်ကစားသမား ဒီပေး
ဒီပေးက ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ကစားသမားတိုင်းက ကစားချင်ကြတယ်လို့ ၀န်ခံပြောကြားပြီးနောက် ဇန်န၀ါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာ လာလီဂါကလပ်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာနည်းပြ ရော်နယ်ကိုးမန်းဟာ အသင်းကို စတင်ကိုင်တွယ်ကတည်းက လိုင်ယွန်တိုက်စစ်ကစားသမား ဒီပေးကို ခေါ်ယူချင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အသင်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့် မခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကြောင့် အသင်းဟာ ကစာသမားတွေကို ရောင်းချရတော့မယ့် အနေအထားအထိကို ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေးဟာ လိုင်ယွန်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း နောက်ဆုံးနှစ်ထဲကို ရောက်နေတာဖြစ်လို့ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ နောက်နွေရာသီမှာ အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူလို့ရနိုင်မှာပါ။
သို့သော်လည်း သတင်းများအရ ဒီပေးဟာ အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြစ်တဲ့အထိကိုတောင် မစောင့်တော့ပဲ ဇန်န၀ါရီမှာပဲ ပြောင်းချင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒူးဒဏ်ရာ ခွဲစိတ်ခံရပြီးတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး အန်ဆုဖာတီက (၄) လလောက် အနားယူရမှာဖြစ်လို့ အသင်းဟာ တိုက်စစ်ပိုင်းကို အရေးတကြီးအင်အားဖြည့်တင်းဖို့ လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟောလန် နဲ့ စပိန် (၁-၁) သရေကျခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ ဒီပေးက “အဲ့ဒီကို မသွားချင်တဲ့သူ ဘယ်သူမရှိဘူးလဲ? ဘာစီလိုနာအသင်းက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အသင်းတွေထဲက တစ်သင်းပါ။ လူတိုင်းက သွားချင်နေပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒါကို စဉ်းစားနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာစီလိုနာအကြောင်း ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ အပြောင်းအရွှေ့ကလည်း မဖွင့်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ ကစားသမားဖြစ်လာဖို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေပါတယ်” လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
နောကျတနျးဒဏျရာပွဿနာတှကွေောငျ့ ရီးရဲလျမကျဒရဈနောကျခံလူ မီလီတာအိုကို ပေါငျ ၃၆ သနျးနဲ့ ချေါယူရနျ ပွငျဆငျနတေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျး